[MMAnime] Yu-Gi-Oh! : Yu-Gi-Oh!
ဂိမ်းတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ Yugi Moto ဆိုတဲ့ကောင်လေးက နှစ်သုံးထောင်ကျော်သက်တမ်းရှိတဲ့ရှေးဟောင်း puzzle တစ်ခုသူ့အဖိုးဆီကနေရရှိလာခဲ့တယ် အဲ့ဒီ puzzle ကိုပြီးအောင် ဆပ်ပြီး puzzle ထဲကနေ ရှေးဟောင်း Pharaoh ဝိဉာဉ်စီးတာခံလိုက်ရတဲ့နောက်မှာတော့ သူ့ရဲ့ကံကြမ္မာဘယ်လိုတွေဆက်ဖြစ်မလဲ ဝိဉာဉ်စီးခံလိုက်ရတဲ့ Yugi ဘယ်လိုပုံစံတွေနဲ့ သူ့ရဲ့ အပေါင်းအပါသူငယ်ချင်းတွေကို ကယ်တင်မလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ် 1998 ကထွက်တဲ့ဇာတ်လမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Resolution အပေါ်သည်းခံကြပါရန်။
Season 1Episode 1 / 720p Mega.nz
Season 1Episode2/ 720p Mega.nz
Season 1Episode3/ 720p Mega.nz